ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်မှုရှိစေဖို့ စိတ်ဓာတ်မြှင့်တင်ပေးနိုင်မယ့် နည်းလမ်း(၅)သွယ် - For her Myanmar
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်မှုရှိစေဖို့ စိတ်ဓာတ်မြှင့်တင်ပေးနိုင်မယ့် နည်းလမ်း(၅)သွယ်
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်သူများနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ပြီး စိတ်ဆင်းရဲနေဦးမှာလား ?
ယောင်းတို့ရေ … ဒီနေ့ခေတ်မှာ ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်သုံးလာကြတဲ့အလျောက် Stella တို့တွေက ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်က မိန်းမလှလေးတွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ပြီး အားမလိုအားမရဖြစ်လာကြတယ်။ ဒါ့အပြင် Stella တို့ ပတ်ဝန်းကျင်က လူတစ်ချို့ရဲ့ အပြုသဘောမဆန်တဲ့ ဝေဖန်မှုတွေကြောင့် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်မှုလျော့နည်းလာတာ အမှန်ပါပဲ။ ပိုဆိုးတာက မိန်းကလေးအများစုဟာ ဒီဝေဖန်မှုတွေရဲ့ သက်ရောက်မှုကြောင့် eating disorder ဆိုတဲ့ စိတ်ရောဂါရလာတာ၊ လူကြားထဲမတိုးရဲတော့တာ၊ စိတ်ဓာတ်ကျတာတွေ ဖြစ်လာတာပါ။ ဒါဆိုရင် Stella တို့တွေ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ချစ်တတ်ပြီး အမြဲယုံကြည်မှုရှိနေအောင် ဘာတွေလုပ်သင့်လဲဆိုတော့ …
(၁) ပြီးပြည့်စုံလွန်းသူမရှိဘူးဆိုတာ သတိချပ်ပါ
ဘယ်သူကမှ ၁၀၀% ပြစ်မျိုးမှဲ့မထင်တာ မရှိပါဘူး။ ပြီးပြည့်စုံတယ်ဆိုတာ လက်တွေ့ထက် စိတ်ကူးယဉ်သက်သက်ပဲဆိုတာ သိထားသင့်ပါတယ်။ ပြီးပြည့်စုံခြင်းကို မျှော်လင့်နေတာက ယောင်းကို ပိုစိတ်ဓာတ်ကျစေရုံပဲ ရှိမှာပါ။
(၂) ကိုယ်ပိုင်အလှကို တန်ဖိုးထားပါ
ကိုယ်ပိုင်အလှဆိုတာ မတောင်းဘဲ ပြည့်တဲ့ဆုပါ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ကြိုက်တဲ့အချက်လေးတွေကို စာရွက်ပေါ်မှာ ရေးချပါ။ စိတ်ပျက်အားငယ်လာတဲ့အချိန်တိုင်း ချရေးထားတာတွေကို ပြန်ဖတ်ပြီး အကောင်းမြင်စိတ်မွေးပါ။ ကိုယ့်မှာသာရှိတဲ့ ထူးခြားတဲ့လှပမှုတွေကို ရှာဖွေပြီး ကျေနပ်နိုင်ပါစေ။
(၃) သူများတွေရဲ့အမြင်ကို ခေါင်းထဲမထည့်ပါနဲ့
ဝလာတယ် ပိန်သွားတယ် အသားမဲသွားပြီ အရပ်ပုလိုက်တာ စတဲ့ ဝေဖန်ချက်တွေကို ဂရုစိုက်နေသ၍ ယုံကြည်မှုဆိုတာ အဝေးကြီးမှာဖြစ်နေမှာပါပဲ။ ကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်တည်မှုကို ဘယ်သူ့ကြောင့်မှ မယိုင်လဲပါစေနဲ့။ လူတိုင်းမှာ အားသာချက် ၊ အားနည်းချက်တွေရှိစမြဲမို့ ဝေဖန်မှုတိုင်းကို မတုန်လှုပ်ပါနဲ့။
Related article >>> Self-esteemလို့ခေါ်တဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ချစ်အောင် ဘယ်လိုနေကြမလဲ
လေ့ကျင့်ခန်းမှန်မှန်လုပ်ပါ။ ကျန်းမာရေးကို အထောက်အကူပြုတဲ့ အစားအစာတွေ များများစားပါ။ ဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒတွေကို ပန်းတိုင်အဖြစ်ထားရှိတာကလည်း ယောင်းကို ကိုယ်ရောစိတ်ပါကျန်းမာပျော်ရွင်စေနိုင်ပါတယ်။ လှဖို့ထက် ကျန်းမာဖို့ကို အာရုံစိုက်ပါ။ လှပြီး ချူချာနေလည်း အလကားပါပဲ။ ကျန်းမာခြင်းက လာဘ်ကြီးတစ်ပါးပါနော်။
(၅) ဆိုရှယ်မီဒီယာကို အယုံအကြည်မရှိပါနဲ့
အပေါ်မှာ ပြောခဲ့သလိုပဲ ဆိုရှယ်မီဒီယာနဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်မှုလျော့နည်းခြင်းက တိုက်ရိုက်အချိုးကျပါတယ်။ ဆိုရှယ်မီဒီယာရဲ့ ထောင်ချောက်မှာ နစ်မွန်းပြီး အရေးပါတာတွေကို ဂရုမစိုက်နိုင်ဖြစ်နေသူတွေထဲမှာ ယောင်းမပါပါစေနဲ့။
Related article >>> ထက်မြက်တဲ့ အမျိုးသမီးတွေ လက်တွေ့ကျင့်သုံးနေတဲ့ ပျော်ရွှင်အောင်နေနည်း (၆) နည်း
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ချစ်တတ်ဖို့ဆိုတာ တကယ်တော့ ပြီးပြည့်စုံခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ်ဟာ ကိုယ်ပါလို့ လက်ခံနိုင်ခြင်းဟာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ချစ်တတ်ခြင်းပါပဲ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ချစ်တတ်လာတာနဲ့အမျှ ယုံကြည်မှုမြင့်တက်လာမယ်။ စိတ်ချမ်းသာပြီး ပျော်ရွှင်လာမယ်။ လုပ်ငန်းခွင်မှာ အောင်မြင်လာပါလိမ့်မယ်။ “Love your own damn self” ပါ ယောင်းတို့ရေ …
ကိုယျ့ကိုယျကိုယျသူမြားနဲ့ နှိုငျးယှဉျပွီး စိတျဆငျးရဲနဦေးမှာလား ?
ယောငျးတို့ရေ … ဒီနခေ့တျေမှာ ဆိုရှယျမီဒီယာတှကေို ကယျြကယျြပွနျ့ပွနျ့သုံးလာကွတဲ့အလြောကျ Stella တို့တှကေ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ ဆိုရှယျမီဒီယာပျေါက မိနျးမလှလေးတှနေဲ့ နှိုငျးယှဉျပွီး အားမလိုအားမရဖွဈလာကွတယျ။ ဒါ့အပွငျ Stella တို့ ပတျဝနျးကငျြက လူတဈခြို့ရဲ့ အပွုသဘောမဆနျတဲ့ ဝဖေနျမှုတှကွေောငျ့ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျယုံကွညျမှုလြော့နညျးလာတာ အမှနျပါပဲ။ ပိုဆိုးတာက မိနျးကလေးအမြားစုဟာ ဒီဝဖေနျမှုတှရေဲ့ သကျရောကျမှုကွောငျ့ eating disorder ဆိုတဲ့ စိတျရောဂါရလာတာ၊ လူကွားထဲမတိုးရဲတော့တာ၊ စိတျဓာတျကတြာတှေ ဖွဈလာတာပါ။ ဒါဆိုရငျ Stella တို့တှေ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျခဈြတတျပွီး အမွဲယုံကွညျမှုရှိနအေောငျ ဘာတှလေုပျသငျ့လဲဆိုတော့ …
(၁) ပွီးပွညျ့စုံလှနျးသူမရှိဘူးဆိုတာ သတိခပျြပါ
ဘယျသူကမှ ၁၀၀% ပွဈမြိုးမှဲ့မထငျတာ မရှိပါဘူး။ ပွီးပွညျ့စုံတယျဆိုတာ လကျတှထေ့ကျ စိတျကူးယဉျသကျသကျပဲဆိုတာ သိထားသငျ့ပါတယျ။ ပွီးပွညျ့စုံခွငျးကို မြှျောလငျ့နတောက ယောငျးကို ပိုစိတျဓာတျကစြရေုံပဲ ရှိမှာပါ။
(၂) ကိုယျပိုငျအလှကို တနျဖိုးထားပါ
ကိုယျပိုငျအလှဆိုတာ မတောငျးဘဲ ပွညျ့တဲ့ဆုပါ။ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ ကွိုကျတဲ့အခကျြလေးတှကေို စာရှကျပျေါမှာ ရေးခပြါ။ စိတျပကျြအားငယျလာတဲ့အခြိနျတိုငျး ခရြေးထားတာတှကေို ပွနျဖတျပွီး အကောငျးမွငျစိတျမှေးပါ။ ကိုယျ့မှာသာရှိတဲ့ ထူးခွားတဲ့လှပမှုတှကေို ရှာဖှပွေီး ကနြေပျနိုငျပါစေ။
(၃) သူမြားတှရေဲ့အမွငျကို ခေါငျးထဲမထညျ့ပါနဲ့
ဝလာတယျ ပိနျသှားတယျ အသားမဲသှားပွီ အရပျပုလိုကျတာ စတဲ့ ဝဖေနျခကျြတှကေို ဂရုစိုကျနသေ၍ ယုံကွညျမှုဆိုတာ အဝေးကွီးမှာဖွဈနမှောပါပဲ။ ကိုယျ့ရဲ့ဖွဈတညျမှုကို ဘယျသူ့ကွောငျ့မှ မယိုငျလဲပါစနေဲ့။ လူတိုငျးမှာ အားသာခကျြ ၊ အားနညျးခကျြတှရှေိစမွဲမို့ ဝဖေနျမှုတိုငျးကို မတုနျလှုပျပါနဲ့။
Related article >>> Self-esteemလို့ချေါတဲ့ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ ခဈြအောငျ ဘယျလိုနကွေမလဲ
လကေ့ငျြ့ခနျးမှနျမှနျလုပျပါ။ ကနျြးမာရေးကို အထောကျအကူပွုတဲ့ အစားအစာတှေ မြားမြားစားပါ။ ဖွဈခငျြတဲ့ဆန်ဒတှကေို ပနျးတိုငျအဖွဈထားရှိတာကလညျး ယောငျးကို ကိုယျရောစိတျပါကနျြးမာပြျောရှငျစနေိုငျပါတယျ။ လှဖို့ထကျ ကနျြးမာဖို့ကို အာရုံစိုကျပါ။ လှပွီး ခြူခြာနလေညျး အလကားပါပဲ။ ကနျြးမာခွငျးက လာဘျကွီးတဈပါးပါနျော။
(၅) ဆိုရှယျမီဒီယာကို အယုံအကွညျမရှိပါနဲ့
အပျေါမှာ ပွောခဲ့သလိုပဲ ဆိုရှယျမီဒီယာနဲ့ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျယုံကွညျမှုလြော့နညျးခွငျးက တိုကျရိုကျအခြိုးကပြါတယျ။ ဆိုရှယျမီဒီယာရဲ့ ထောငျခြောကျမှာ နဈမှနျးပွီး အရေးပါတာတှကေို ဂရုမစိုကျနိုငျဖွဈနသေူတှထေဲမှာ ယောငျးမပါပါစနေဲ့။
Related article >>> ထကျမွကျတဲ့ အမြိုးသမီးတှေ လကျတှကေ့ငျြ့သုံးနတေဲ့ ပြျောရှငျအောငျနနေညျး (၆) နညျး
ကိုယျ့ကိုယျကိုယျခဈြတတျဖို့ဆိုတာ တကယျတော့ ပွီးပွညျ့စုံခွငျးမဟုတျပါဘူး။ ကိုယျဟာ ကိုယျပါလို့ လကျခံနိုငျခွငျးဟာ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျခဈြတတျခွငျးပါပဲ။ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျခဈြတတျလာတာနဲ့အမြှ ယုံကွညျမှုမွငျ့တကျလာမယျ။ စိတျခမျြးသာပွီး ပြျောရှငျလာမယျ။ လုပျငနျးခှငျမှာ အောငျမွငျလာပါလိမျ့မယျ။ “Love your own damn self” ပါ ယောငျးတို့ရေ …
Tags: #health #knowledge, body image, Health, Knowledge, lifestyle, mental health, self love, tips
အသက် (၂၀) တုန်းက အချစ်ရေးနဲ့ အသက် (၃၀) က အချစ်ရေးနဲ့ ကွာခြားချက် (၅) ချက်
ဖက်ရှင်ဘုရင်မအဖြစ် တင်စားခံရတဲ့ ဟောလိဝုဒ်ရွှေခေတ်က အအောင်မြင်ဆုံးမင်းသမီး
Stella April 3, 2019